Nin isaga oo is-del-delaya la bad-baadiyay oo xabsi ay dhigeen ciidamada amaanku. (Sababtu maxay tahay?)	| Salaan Media
Nin isaga oo is-del-delaya la bad-baadiyay oo xabsi ay dhigeen ciidamada amaanku. (Sababtu maxay tahay?)
Ciidanka Booliiska Saldhiga Gebilay ee Somaliland ayaa la sheegay in ay xidheen nin magaciisa lagu sheegay Nuur Axmed Dhidar oo saldhiga Booliska hortiisa isku dal-dalayayay hasa yeeshee la bad-baadiyay kadib markii Police-ku ay arkeen isaga oo xaaladu ku xuntahay.
Warar laga helay ehelka ninka xabsiga loo dhaadhiciyay kadib markii uu isku dayay in uu naftiisa gooyo ayaa waxa ay sheegayaan in ninkani uu ku dhaqaaqay fal denbiyeedka uu naftiisa ku goynayay kadib markii uu ka carooday nin isaga dhibaata u geestay oo baliisku ay xabsiga ka daayeen arintaas oo uu u arkay cadaalad darro aad u daran.
Nuur Axmed Dhidar ayaa la sheegay in uu ahaa Reer Miyi oo ku noolaa in badan deegaanka Wajaale kaas oo sida la sheegay qaba dhaawac madax ka soo gaadhay doonayayna in wax laga qabtyo ninkii dhibka u ka tbanayay hasa yeeshee markii uu ogaaday in arintiisa cid wax ka qabaneysa aysan jirin uu go’aansaday in uu saldhiga hortiisa isku dal-dalo si uu nafta isu dhaafiyo.
Si kastaba arintaan ayaa waxa ay noqoneysaa mid kamid ah dhaqamada ku cuusb Soomaaliya xilliyaadan danbe, maadaama ay isi soo tarayaan dadka naftooda dilaaya.
Dhawaan waxaa dalka Talyaaniga naftiisa ku diley nin lagu magacaabi Jiray Guuleed Maxaed Maxamuud oo la sheegay in uu dabaq iska soo tuuray kadib markii uu ka cadhooday sharci la’aan in muda ah dalkaasku ku heysatay, waxaana sidoo kale dalka Mareykanka maalmo kahor dad badan ku dilay isna is-dilay mawaadin Soomaaliyeed.